အုပ်စိုးခန့်အတွက် ဂုဏ်ပြုစကာြးေ ပာပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်း – XB Media Myanmar
သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းက အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါတယ်. အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ အမျှ လှပတဲ့ အသားအရေ လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်လာရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း အခုလိုပြောပြလာပါတယ် မကြာခင် တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် အုပ်စိုးခန့် အတွက် သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းက ဂုဏ်ပြု အမှတ်တရ စကားပြောပြလာပါတယ်. ယွန်း ယွန်း နဲ့ အုပ်စိုးခန့်တို့ဟာ မကြာခဏ ဆိုသလို အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်စေဖို့ မီဒီယာတွေကနေတဆင့် ဆုတောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်
” လူငယ်တွေ အခုလို ငယ်ငယ်လေးမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဘဝမှာ မှတ်တိုင်တွေ လုပ်နိုင်တာ ညီမ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်. အများကြီးလည်း အောင်မြင်ပါစေ လို့ ညီမ ဆုတောင်းပေးပါတယ်. ညီမကို ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ပရိသတ်တွေ ဆိုပေမယ့်လည်း ညီမအတွက် ကတော့ မိသားစုလိုပါပဲ” လို့ သူကဆိုပါတယ်
ကလေးသရုပ်ဆောင်အရွယ်ကတည်းက ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီယွန်းယွန်းဟာ အရွယ်ရောက်လာပြီး တဲ့နောက် ပိုပြီးလှလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ငယ်ငယ်တုန်းကထက် ပိုပြီး ချစ်ခင်အားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ထက်ပိုပြီးလှပနေတဲ့ သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်ပြောင်းသွားလို့လည်း အမြင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှဖို့လည်း ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး Gym လည်းမသွားဖြစ်ဘူး။အစားဆိုရင်လည်း စားချင်တာရှိရင် စားလိုက်တယ်။ Skin Care တွေကိုလည်း အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ လုပ်ရမှာပျင်းတော့ နေချင်သလို နေတဲ့ ကလေးထဲမှာ ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ယွန်းယွန်းကတော့ သူ့ကိုဝန်းရံပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပရိသတ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ဒီအချစ်တွေအပေါ် အခွင့်အရေးမယူဘူးလို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
ဝန်းရံပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သမီးဒီ့ထက်ပိုပြီးတော့ လိမ်လိမ်မာမာနေပါ့မယ်၊ လိမ်လိမ် မာမာနေတယ်ဆိုတာကလည်း ပရိသတ်တွေက သူတို့ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုရင် ဘယ်လိုပဲမြင်မြင်ချစ်နေကြတာပဲလေ။ ငါဘယ်လိုနေနေ ချစ်နေကြတာပဲ ဆိုပြီးတော့လည်း အခွင့်ကောင်းမယူသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ယွန်းယွန်းက အခုလက်ရှိမှာ အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒီနောက် ကျွန်မနှင်းဆီပါမောင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့လည်း ကလေးသရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုချိန်မှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာရှိသေးတာကြောင့် သူနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကာရိုက်တာကိုပဲ ရွေးချယ် ရိုက်ကူးသွားမယ်လုိ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။Credit-Cele Yatkwat
သရုပျဆောငျ ယှနျးယှနျးက အုပျစိုးခနျ့ရဲ့ တဈကိုယျတျော တေးစီးရီးအတှကျ ဂုဏျပွုစကားပွောခဲ့ပါတယျ. အရှယျရောကျလာတာနဲ့ အမြှ လှပတဲ့ အသားအရေ လေးတှေ ပိုငျဆိုငျလာရတဲ့ အကွောငျးကိုလညျး အခုလိုပွောပွလာပါတယျ မကွာခငျ တဈကိုယျတျောအခှေ ထှကျရှိလာတော့မယျ့ အုပျစိုးခနျ့ အတှကျ သရုပျဆောငျ ယှနျးယှနျးက ဂုဏျပွု အမှတျတရ စကားပွောပွလာပါတယျ. ယှနျး ယှနျး နဲ့ အုပျစိုးခနျ့တို့ဟာ မကွာခဏ ဆိုသလို အနုပညာအလုပျတှေ လုပျလုပျနတောဖွဈတဲ့အတှကျ အောငျမွငျစဖေို့ မီဒီယာတှကေနတေဆငျ့ ဆုတောငျး ပေးခဲ့ပါတယျ
” လူငယျတှေ အခုလို ငယျငယျလေးမှာ အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ဘဝမှာ မှတျတိုငျတှေ လုပျနိုငျတာ ညီမ အရမျးဝမျးသာပါတယျ. အမြားကွီးလညျး အောငျမွငျပါစေ လို့ ညီမ ဆုတောငျးပေးပါတယျ. ညီမကို ခဈြခငျပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှေ ကိုလညျး ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ. ပရိသတျတှေ ဆိုပမေယျ့လညျး ညီမအတှကျ ကတော့ မိသားစုလိုပါပဲ” လို့ သူကဆိုပါတယျ
ကလေးသရုပျဆောငျအရှယျကတညျးက ပရိသတျအားပေးမှုမြားစှာရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျအကယျဒမီယှနျးယှနျးဟာ အရှယျရောကျလာပွီး တဲ့နောကျ ပိုပွီးလှလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ငယျငယျတုနျးကထကျ ပိုပွီး ခဈြခငျအားပေးလာတာဖွဈပါတယျ။ အရငျထကျပိုပွီးလှပနတေဲ့ သူ့ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကိုလညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
အရှယျပွောငျးသှားလို့လညျး အမွငျပွောငျးသှားတာဖွဈမှာပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို လှဖို့လညျး ဘာမှမလုပျဖွဈဘူး Gym လညျးမသှားဖွဈဘူး။အစားဆိုရငျလညျး စားခငျြတာရှိရငျ စားလိုကျတယျ။ Skin Care တှကေိုလညျး အခြိနျအမြားကွီးပေးပွီးတော့ လုပျရမှာပငျြးတော့ နခေငျြသလို နတေဲ့ ကလေးထဲမှာ ပါတယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။ယှနျးယှနျးကတော့ သူ့ကိုဝနျးရံပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှကေို ကြေးဇူးတငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပရိသတျခဈြတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈလို့ ဒီအခဈြတှအေပျေါ အခှငျ့အရေးမယူဘူးလို့လညျးသူကဆိုပါတယျ။
ဝနျးရံပေးကွတဲ့ ပရိသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ၊ သမီးဒီ့ထကျပိုပွီးတော့ လိမျလိမျမာမာနပေါ့မယျ၊ လိမျလိမျ မာမာနတေယျဆိုတာကလညျး ပရိသတျတှကေ သူတို့ခဈြတဲ့အနုပညာရှငျတှဆေိုရငျ ဘယျလိုပဲမွငျမွငျခဈြနကွေတာပဲလေ။ ငါဘယျလိုနနေေ ခဈြနကွေတာပဲ ဆိုပွီးတော့လညျး အခှငျ့ကောငျးမယူသငျ့ဘူးလို့ထငျတယျ” လို့ပွောပါတယျ။
ယှနျးယှနျးက အခုလကျရှိမှာ အသကျ ၁၈ နှဈကြျောခဲ့ပါပွီ။ အဲ့ဒီနောကျ ကြှနျမနှငျးဆီပါမောငျ ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့လညျး ကလေးသရုပျဆောငျ အကယျဒမီဆုကို ရရှိခဲ့ပွီးပါပွီ။ အခုခြိနျမှာတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျသာရှိသေးတာကွောငျ့ သူနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ကာရိုကျတာကိုပဲ ရှေးခယျြ ရိုကျကူးသှားမယျလို့ အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။